Maxay tahay sababta argagexisadu isagu urursadeen Galmudug? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay tahay sababta argagexisadu isagu urursadeen Galmudug?
Waxuu CC Warsame soo dhaweeyay howlgallada socda ee Al-Shabaab looga saarayo degaanada ay ka joogto gobollada Dhexe.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha Wadajir, ahna Musharax Madaxweyne ayaa ka hadlay howlgallada ay Ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug ka wadaan Galgaduud iyo Mudug.
CC Warsame ayaa boggaadinayaa guulaha Ciidanka Daraawiishta Galmudug iyo kuwa Xooga dalka ay kasoo hooyeen la dagaalanka Kooxda Al-Shabaab, oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay laga saarey Bacaadweyne iyo Camaara, oo Koonfurta Mudug dhaca.
Sababta ay argagexisadu isku soo urursadeen Galmudug, ayuu CC Warsame ku sheegay inay tahay in ay gacanta ku dhigaan deegaanada istiraatiijiga ah, si ay ugu talaabaan Puntland oo saldhig ay ka sameysteen.
Wuxuu ku baaqay Musharaxa in si wadajir ah la iska kaashado dagaalka argagexisada Al-Shabaab oo aan Galmudug oo keli ah lagu fiirsan, maadaama mas'uuliyaddu tahay mid wadareed, oo cid kasta u taallo, sababtoo ah hadii aan shacabka Soomaaliyeed isku tashan, cidna dalkooda uma nabadeynayso.